Why NOVU – Novu
What is NOVU about?
It is the flagship brand of Novena Global Lifecare Group, one of the largest healthcare and medical aesthetic groups worldwide. A Singapore-based global brand, NOVU is the largest medical aesthetic chain in Singapore with 10 clinics and over 150,000 patients and only Singapore medical aesthetic chain with own R&D and manufacturing arm in Korea.
What is NOVU’s presence globally?
NOVU has over 250 outlets clinics in Singapore, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, Indonesia, India, Malaysia, Myanmar and Spain. Specialises in affordable non-surgical medical aesthetic and wellness treatments for mass market.
What is NOVU’s track record?
Established track record of over seven million procedures performed worldwide and over two million patients in international patient database.
Who are the people behind NOVU?
NOVU was founded in 2010 by cousins Nelson Loh, Executive Chairman and Co-Founder and Terence Loh, CEO and Co-Founder, former investment bankers with experience in the healthcare business. They made their foray into medical aesthetics having invested inaKOSDAQ-listed medical equipment manufacturing company in Korea, and realisingagap in the market for safe, effective and accessible aesthetics.
How is NOVU different from other aesthetic companies?
Before NOVU, aesthetics treatments were costly and could only be afforded by the affluent. NOVU has been disrupting the aesthetic medical industry with affordable, accessible non-invasive treatments. The group adopts an integrated approach to skincare witha360 Solution focusing on colour, contour and consistency of skin, which encompassesasuite of treatments and doctor-developed homecare products. It is one of the biggest global aesthetics players, with its second clinic in Europe opening soon and over 100 outlets also opening at the same time in China. We developed our own technology and products in-house for the optimal results, and priced within the reach of everyone
How is the price point of NOVU treatment so affordable?
NOVU believes in making aesthetics accessible to all regardless of one’s financial strength, hence it removes the fuss to provide the patients with the essentials. Additionally, laser treatments were historically used to remove the tattoos and hence encompassed multiple functions which aren’t necessary for skin treatments, NOVU’s R&D team has removed the unnecessary functions, hence making aesthetics affordable.
What is the NOVU business strategy?
Invest in R&D and equipment to drive cost efficiencies to benefit customers. Form alliances with partners via franchise model or joint ventures for international expansion. Expanding in Europe and Latin America, plans to open over 200 clinics by 2020. Broaden and deepen product distribution through tie ups with partners.
What does NOVU specialise in?
We believe in doctor-developed treatments administered by medical professionals, complemented byacomplete range of skincare to maintain results. Our signature treatment is the P+ Laser, which involves the use ofanon-ablative, gentle laser to reduce pigmentation, even out skin tone, vaporise acne-causing dirt and bacteria, and brighten the complexion. This fast and effective treatment involves zero downtime and minimal discomfortWe also have three skincare lines:
NOVU Elemental, moisturising and hydrating series.
NOVU Enliven, anti-aging series
NOVU Active, for consumers on the move
NOVU သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အကြီးဆုံးသော ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပဆေးဝါး အုပ်စုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Novena Global Lifecare Group ၏ ထိပ်သီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောNOVU သည်စင်ကာပူရှိအကြီးဆုံးအလှအပဆိုင်ရာဆေးဝါးကွင်းဆက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ဆေးခန်း၁၀ခုနှင့်လူနာပေါင်း၁၅၀,၀၀၀ကျော်ကိုကုသပေးနေပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ကိုယ်ပိုင်သုသေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ ရှိသောတစ်ခုတည်းသောစင်ကာပူအလှအပဆိုင်ရာဆေးဝါးကွင်းဆက် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ မြန်မာနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့တွင်NOVU ဆေးခန်းခွဲပေါင်း ၂၅၀ကျော် ရှိပါသည်။ လူများစုအတွက်လက်လှမ်းမီသောခွဲစိတ်မှုမပါသည့်အလှအပဆိုင်ရာဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးကုသမှုများကိုအထူးပြုပါသည်။
NOVUကိုကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောယခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သည့်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ၊တွဲဖက်တည်ထောင်သူNelson Loh နှင့်CEO၊တွဲဖက်တည်ထောင်သူTerence Loh တို့ဝမ်းကွဲညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်မှ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။စျေးကွက်အတွင်းတွင်အန္တရာယ်ကင်း၊ထိရောက်၍လက်လှမ်းမီသည့်အလှကုန်ပစ္စည်းများလိုအပ်နေမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံရှိKOSDAQ-စာရင်းဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အလှအပဆိုင်ရာဆေးဝါးနယ်ပယ်အတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
NOVUမရှိခင်က အလှအပဆိုင်ရာကုသမှုများသည် စျေးကြီး၍ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူများသာ ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။ NOVU သည် လက်လှမ်းမီ၍ သင့်လျော်သော ခွဲစိတ်ရန်မလိုသည့် ကုထုံးများဖြင့် အလှအပဆိုင်ရာဆေးဝါးနယ်ပယ်တွင် အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေလျှက် ရှိပါသည်။ NOVU အုပ်စုသည် တွဲဖက်ကုထုံးများနှင့် ဆရာဝန်များမှ တီထွင်ထားသော အိမ်သုံးထုတ်ကုန်များပါဝင်သည့် အရေပြား၏ အရောင်အသွေးနှင့် ညီညာမှုတို့ကို အဓိကအာရုံစိုက်ပေးသော 360 Solution ဖြင့် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပြည့်စုံစေပါသည်။မကြာမီတွင် ဥရောပတိုက်အတွက် ဒုတိယဆေးခန်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် တရုတ်၌ဆေးခန်းခွဲပေါင်း၁၀၀ကျော် ဖွင့်လှစ်တော့မည့် ကမ္ဘာ့အလှအပဆိုင်ရာ အင်အားကြီးများ အနက်မှ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးရလာဒ်များရရှိပြီးလူတိုင်းလက်လှမ်းမီသည့်စျေးနှုန်းအတွင်းရှိစေရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းသပ်တီထွင်ထားပါသည်။
NOVUမှ အလှအပကုထုံးများသည် လူတစ်ယောက်၏ ငွေကြေးအင်အားပေါ် မူတည်ခြင်းမရှိဘဲ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်လာစေရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံကြီးချဲ့ခြင်းများမရှိဘဲ လူနာများအတွက် လိုအပ်သည်များကိုသာ စီစဉ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လေဆာကုထုံးများကို သမိုင်းတလျှောက် ဆေးမှင်ကြောင်ဖျက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး အသားအရေကုသမှုအတွက် မလိုအပ်သော အစွမ်းသတ္တိများစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ NOVU ၏R&D အဖွဲ့မှ ထိုမလိုအပ်သော အစွမ်းသတ္တိများအားဖယ်ရှား၍ ကုသမှုများကို ပိုမိုစျေးသက် သာစေသည်။
ကုန်ကျစားရိတ်အကျိုးရှိမှုတိုးတက်စေပြီး စားသုံးသူများအကျိုးရှိစေရန် R&Dနှင့် အသုံးအဆောင်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတိုးချဲ့ရန်အတွက် မိတ်ဖက်များနှင့် ဖရန်ချိုင်းပုံစံ သို့မဟုတ် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် မဟာမိတ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဥရောပနှင့် လက်တင်အမေရိကတို့တွင် တိုးချဲ့နေပြီး ၂၀၂၀ မတိုင်မီ ဆေးခန်းပေါင်း ၂၀၀ကျော်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေမှုကိုဖြန့်ကျက်တိုးချဲ့ရန်မိတ်ဖက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဆရာဝန်များမှ တီထွင်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများမှ ကြပ်မတ်ပေးသော ကုသမှုများတွင် အမျိုးအစားစုံလင်သော အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ရလာဒ်ကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့၏ အမှတ်အသားကုထုံးသည် P+ လေဆာဖြစ်ပါသည်။ ဤကုထုံးတွင် ထိခိုက်စေခြင်းမရှိသော နူးညံ့သည့်လေဆာအားသုံး၍ အမည်းစက်များကို လျော့နည်းစေခြင်း၊ အသားရောင်ညီညာစေခြင်း၊ ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဖုန်မှုန့်နှင့်ဘက်တီးရီးယားများကို အငွေ့ပြန်စေခြင်း၊ အသားဖြူဖွေးစေခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ ဤမြန်ဆန်၍ထိရောက်သောကုသမှုကြောင့် အနားယူချိန်ယူစရာမလိုဘဲ နာကျင်ခံစားရမှုကိုလည်း အနည်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။ကျွန်တော်တို့တွင်skincare lineသုံးခုရှိပါသည်:
ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရေဓာတ်ဖြည့်ဆည်းရန် series: NOVU Elemental
ဇရာဆန့်ကျင်ရန် series: NOVU Enliven
လှုပ်ရှားသွားလာသူ စားသုံးသူများအတွက်: NOVU Active
Ernst & Young Singapore Emerging Enterprise of the Year in 2014
Chinese Venture Best Investment Case Award in 2014
Ernst & Young Fudan University Most Promising Enterprise Award in 2016
CNBC SIXCAP Unicorn Award Finalist in 2016
Women’s Weekly Best of Beauty Buys Winner for Best Line-Reducing Treatment in 2017
Women’s Weekly Spa Awards for Best Skin Hydrating Treatment in 2017
Harper’s Bazaar Awards for Best Express Facial in 2017
Harper’s Bazaar Spa Awards for Best Instant Results Eye Treatment: Eye Depuffer Laser in 2018
Singapore Women’s Weekly Best of Beauty Buys for Best Serum – Antioxidant: NOVU Enliven Radiance Essence in 2018
CLEO Clear Skin Awards for Best Moisturiser: NOVU Enliven Smoothening Hydrator in 2018
CLEO Clear Skin Awards for Best Eye Care: Eye Depuffer Laser in 2018
Outstanding Achievement in Branding (Regional) by the Singapore Prestige Brand Award (SPBA) 2018
သိသာထင်ရှားသော သတင်းများတွင် ပါဝင်မှု
天使爱才不爱财Are You my Angel?, Elle China, 30 Sep 13 (link)
Cousins who gave up banking for beauty (sector), Straits Times, 31 Jul 17 (link)
Roulette spin leads cousins to leave jobs, now they run Asia’s largest medical aesthetics chain, The Peak,3Jan 18 (link)
Facing the future, Business Times SME Magazine,3Jan 18 (link)
Nelson & Terence Loh, Founders of Novena Global Lifecare Group, Business Times Weekend, 23 Feb 18 (link)
新加坡人的隐忧：失去饥饿感——访在中国闯天下的罗氏堂兄弟, Lianhe Zaobao, 23 Feb 18 (link)
Novena Global Lifecare Group’s betting on aesthetics, Straits Times, 12 Mar 18 (link)